Started this discussion. Last reply by ကွန်းဇော် အညာမြေ Oct 8, 2011. 1 Reply0Likes
အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး မင်္ဂလာပါ...ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးပြီ ဖြစ်ပါသဖြင့် ယခင်ကအတိုင်း ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းအသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပေါ်မှုများကိုလည်း သည်းခံပေးကြသည့်အတွက် ကျေးဇူးများစွာတင်ကြောင်း ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်မှ တာဝန်ရှိသူများက လေးစားစွာဖြင့် ပြောကြားလိုပါသည်။အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ၊ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ဘ၀နှင့်ဆန္ဒ ထပ်တူကျနိုင်ကြပါစေ။ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Red Ribbon From 2k9eo1s3hynju Red Ribbon From U Chit Red Ribbon From Peaceangel Red Ribbon From 1l0m6ic7pj6jw
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 7, 2011 တွင်9:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 15 Comments4Likes
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 22, 2011 တွင်11:41am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 8 Comments4Likes
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 9, 2011 တွင်8:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 60 Comments 13 Likes
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 24, 2011 တွင်4:16pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။7Comments5Likes
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 24, 2011 တွင်4:04pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments2Likes
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 24, 2011 တွင်3:32pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment3Likes
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 24, 2011 တွင်3:15pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment0Likes
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 25, 2011 တွင်12:13pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 16, 2011 တွင်2:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments3Likes
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 12, 2011 တွင်12:54am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 11, 2011 တွင်7:34pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment4Likes
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 20, 2011 တွင်11:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 20, 2011 တွင်1:52pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 10, 2011 တွင်10:29pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။6Comments5Likes
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 2, 2011 တွင်1:32pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
ဒီဘလော့ကို မေ 30, 2011 တွင်8:47pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments7Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 30, 2011 တွင်7:28pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို မေ 23, 2011 တွင်11:11pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments4Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 23, 2011 တွင်10:43pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments3Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 23, 2011 တွင်9:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments2Likes
12:34pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 7, 2017, တွင် May Thuzar Kyaw မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:19pm အချိန်မေ 4, 2013, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမလေး စန္ဒာ လုံးဝမတွေ့ ရတော့ပါ..အဆင်ပြေလား ဘာတွေဖြစ်နေပါလဲး
2:08am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 30, 2012, တွင် စိုင်းမင်းထွန်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:18pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 13, 2012, တွင် မျိုးသက်ခိုင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:38pm အချိန်စက်တင်ဘာ 1, 2012, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာသာတရားပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုရှိတာကို ကြိုဆိုပါတယ်၊ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒကာမရေ......... အဓိကကတော့ အဘိဓမ္မာအကျင့်တရားနဲ့ နိဗ္ဗာန်လမ်းကို မြန်းဖို့နော်...။ ပန်းတိုင်ကို လှမ်းကိုင်နိုင်ပါစေ....။
2:36pm အချိန်စက်တင်ဘာ 1, 2012, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:17am အချိန်သြဂုတ် 16, 2012, တွင် အရှင်အာစိဏ္ဏ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:44pm အချိန်သြဂုတ် 12, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မတွေ့ တာကြာလို့လာလယ်သွားပါတယ်
12:16am အချိန်ဇူလှိုင် 9, 2012, တွင် ဇင်မင်းမောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အခုမှ ရှာဖွေရင် တွေ့တာပါ
အစ်မ side က ဘုရားပုံတွေ ပူဇော်ချင်ပါတယ်
12:46pm အချိန်ဇူလှိုင် 4, 2012, တွင် ရှင်ပညာဇောတ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:59am အချိန်ဇွန် 30, 2012, တွင် ဦးကောက် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:42am အချိန်ဇွန် 23, 2012, တွင် နွေဦးမောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:21pm အချိန်ဇွန် 16, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမလေး လာလယ် သွားပါတယ်.
12:07pm အချိန်ဇွန် 3, 2012, တွင် ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:45am အချိန်မေ 31, 2012, တွင် minminoo မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...အခုလို ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ လက်တွဲကြိုဆိုပြီး အသိပညာပေးဝေပေးတဲ့ ဒီGroup ထဲမှ အစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
နောင်လည်းဒီထက်မက ဆထက်တန်ဖိုး တိုးတက်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ ဒီgroupကြီးနဲ့ အတူ
မေတ္တာပို့ သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
5:21pm အချိန်မေ 30, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမလေး စန္ဒာ မွေးနေ့ ဆုတောင်း ရယ် ကိတ်မုန့် ရယ် ပန်စည်းရယ်
1:18am အချိန်မေ 19, 2012, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမလေးရေ မမလဲလာလည်သွားပါတယ်ရှင် လက်ဆောင်လေးထားခဲ့တယ်နော်။
At 8:55pm on မေ 12, 2012, U Chit gave စန္ဒာagift…
9:23pm အချိန်မေ 9, 2012, တွင် A BuddhismworldAdmin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ပျောာ်နေတာကြာပြီနော် ညီမလေးခုမှတွေ့တယ် အကိုယ်လည်းလာလည်သွားပါတယ် လက်ဆောင်ကတော့မပါလာဘူး စကားလက်ဆောင်ပဲယူလာပေးပါတယ် ညီမတစ်ယောက် ဘ၀လွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကောင်းကို